Liisaska guryaha Iibka iyo Ijaarka gudaha Spain
Isbaanish (Isbaanish: España, [esˈpaɲa] (Ku saabsan codbixintan)), waxay si rasmi ah u tahay Boqortooyada Spain (Isbaanish: Reino de España), waa waddan ku yaal Koonfur-galbeed ee Yurub oo leh meelo ka mid ah dhulalka Gibraltar iyo Badweynta Atlanta. Soohdinteeda qaaradda Yurub waxay ku taal Jasiiradda Iberian Peninsula. Dhulkeeda sidoo kale waxaa ku jira laba jasiiradood: Jasiiradaha Canary ee ka baxsan xeebta Waqooyiga Afrika, iyo jasiiradaha Basaaric ee ku teedsan badda Mediterranean. Casumaadaha Afrikaanka ah ee Ceuta, Melilla, iyo Peñón de Vélez de la Gomera, waxay Spain ka dhigaysaa waddanka keliya ee Yurub ee xuduud ahaan la leh dal Afrikaan ah (Morocco). Dhowr jasiiradood oo yaryar oo ku yaal Badda Alboran sidoo kale waxay ka mid yihiin dhulka Isbaanishka. Xeebta dalka waxaa xadka u leh dhanka koonfureed iyo bariga dhanka Badda Mediterranean-ka marka laga reebo dhul yar oo xaduud la leh Gibraltar; waqooyiga iyo waqooyi-bari faransiiska, Andorra, iyo Bay of Biscay; iyo galbeedka iyo waqooyi-galbeed ee ay kala wataan Boortaqiiska iyo Badweynta Atlantik sida ay u kala horreeyaan. Iyada oo leh dhul ballaadhan oo ah 505,990 km2 (195,360 sq mi), Spain waa dalka ugu weyn Koonfurta Yurub, dalka labaad ee ugu weyn Galbeedka Yurub iyo Midowga Yurub, waana dalka afraad ee ugu balaaran aag qaarada Yurub. Iyada oo dadkeedu ka badan yihiin 47.3 milyan, Spain waa waddanka lixaad ee ugu dadka badan Yurub, iyo waddanka afraad ee ugu dadka badan Midowga Yurub. Caasimadda Spain iyo magaalada ugu weyn waa Madrid; Meelaha kale ee waaweyn ee magaalooyinka waxaa ka mid ah Barcelona, ​​Valencia, Seville, Zaragoza, Málaga, iyo Bilbao.